नेपाली लेखक थपलियाको कृति “लाईफ इज नट इजि”नोबेल पुरस्कार लिट्रेचरमा सहभागी हुने – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०४:५८ English
नेपाली लेखक थपलियाको कृति “लाईफ इज नट इजि”नोबेल पुरस्कार लिट्रेचरमा सहभागी हुने
न्यूयोर्क । न्यूयोर्क निबासी नेपाली युबा लेखक राजन थपलिया को किताब “लाईफ इज नट इजि” २०१५ यो बर्ष स्विडेन को स्टकहोम, स्वीडीश एकेडमी मा हुने नोबेल पुरस्कार लिट्रेचर मा सहभागिता जनाउने भएको छ । “लाईफ इज नट इजि” यो किताब जिबन को भोगाइ को हरेक पाटो लाई समेटिएर लेखिएको कविता संग्रह हो । यो कृती को सह लेखक क्यानेडियन नागरिक कबी एन ब्राडी हुनुहुन्छ।
मान्छे को जिबन लाई सधै एक सुन्दर फुल तथा समय को भेल अनि कर्म को खेल को रुप मा परिभासित गर्न रुचाउने ५९ बर्षिय कबी ब्राडी नेपाली युबा राजन सँग सह कार्य गर्न पाउदा आफु अझै पनि तन्नेरी नै छु भन्ने महसुस गरेकी छु भनेर भनिन।
आफु ले नेपाली कला सस्कृती को बारे मा धेरै जान्ने मौका पाएको, धेरै कुरा सिक्ने अबसर पाएको अब छिटै नै बुद्द को देश नेपाल घुम्न आउन मन लगेको समेत भनिन । नेपाली हरु सोझा, अन्तयन्त इमान्दार छन्, नेपाली हरु भने पछी सधै मनमा माया को भाबना आउछ” भनेर केनिडियन कबी एन ब्राडी बताउनु हुन्छ।
“लाईफ इज नट इजि” – जिबन सुन्दर छ, यो फुल जस्तै सुगन्धीत बासनादार छ तर सजिलो छैन किनभने हामिले जिबन बाची रहे पनि जिबन लाई बुझ्न सकेनौ, माछा पानी मा बस्छ तर त्यसले पानी को अस्तित्व के हो भनेर कहिले सोध्दैन तर हामी त मान्छे हौ तैपनी जिबन जिइ रहेका छौ तर पनि जिबन के हो ?
भन्ने कुरा बुझेनौ अनि जिबन भर जिबन को परिभासा खोजेरौ यती मुल्यवान जिबन कौडी को मोलमा बेच्न बध्य हुन्छौ। जिबन को सुबास लाई बुझ्न नसके प्रगती को सिखर चड्न नसकिने र संघर्श गर्ने हरु सँग जित सधैं नजिक हुन्छ, सङ्घसिल मान्छे हरु गर्ने हरु नै बास्तबिक सफलता को हकदार हुन । जिबन सङ्घर्स बाट कहिले हार खान नहुने लेखक थपलिया बताउनु हुन्छ।
किताब मा जिबन को अध्यारो र उज्यालो पाटो लाई मात्र केलाईएको छैन । बिश्व को सर्बचो सिखर सगरमाथा सम्बन्धी कबिता पनि छ । लेखक ले देश प्रती को प्रेम लाई पनि उक्त पुस्तक मा बिराट किसिम ले प्रस्तुत गरेका छन।
नारी को जिबन पुरुष को जिबन विवाह पछीको क्षण्, बियोग को पिडा, माया मा रम्नु को मज्जा, प्रेम को गहिरो परिभासा, बल्यकाल का दिन हरु सम्झेर घर को झ्याल बाट शहर ठल्नु को मज्जा यि आदी कुरा हरु समेटिएको छ।
उक्त पुस्तक बिश्व प्रसिद्ध बुक स्टोर बार्न्स एन्ड नोबेल द्वरा बजार ब्यबस्थापन गरिएको थियो भने उक्त पुस्तक इबे, अमेजन जस्ता लोकप्रिय अन लाईन हरु मा पनि उपलब्ध छ । उक्त पुस्तक युरोप्, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, र इन्डिया को बजार हरु मा पनि उपलब्ध छ।
हाम्रो पब्लिकेसन बाट प्रकासित पुस्तक यति ठुलो प्रतिस्पर्धा मा जानु निकै गर्ब को कुरा भएको अमेरिकन स्टार बूक का ज्याकी भेलोनोस्की बताउनु हुन्छ । राजन को किताब मा गहिरो दर्शन भए को र सहजै जो कोही को मन छुने कुरा एडल्फाइ युनिभर्सिटी का प्रोफेस र डा. माचा बताउनु हुन्छ।
जिबन बुझ्न नसकेर मात्र गार्हो भएको हो, जिबन त एकदम सरल छ,निस्चल छ तर हाम्रो सोचाइ नै जटिल छ दिन प्रतिदिन झन – झन जटिल बानाउदै गइ रहेका छौ । कबितामा, कबिता मात्र छैन जिबन को चिन्तन र गहिरो दर्शन पनि छ।
जिनब भने को हामीले जस्तो बनाउछौ त्यस्तै बन्ने कुरा लेखक थपलिया बिश्वाश गर्नु हुन्छ । उक्त पुस्तक मा बिश्व प्रसिद्ध “नाएगरा फल्स” को सुन्दर्ता लाई अत्यन्त मनमोहक ढङ बाट प्रस्तुत गरिएको छ । जिबन का अबरोह र भगवान सँग प्रस्न यस्ता बिबिध बिषय हरु समेटिएको यो कबिता संग्रह लाई अमेरिकन स्टार पब्लिकेसन बोस्टन ले २०१३ अगस्ट २३ मा प्रकासन गरे को थियो।
यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा नोबेलको मृत्युको वार्षिकोत्सवमा एक वार्षिक समारोहमा स्टकहोममा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । साहित्यको पहिलो नोबेल पुरस्कार सन् १९०१ मा फ्रान्सेली कवि तथा निबन्धकार सुली प्रुधोम साहित्यमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । स्टकहोममा नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोहको मुख्य आर्कषण त्यस बेला हुन्छ जब नोबेल पुरस्कार विजेतालाई महामहिम स्वीडेनको राजाको हात बाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने गरिन्छ।
नोबेल पुरस्कार मा सहभागिता को बारेमा राजन थपलिया भन्नु हुन्छ – आज जिबन मा नयाँ उर्जा थपिएको छ । बिश्व कप जित्नु मात्र उपलब्धी होईन मेरो बिचार मा त सहभागिता जनाउनु पनि एक सफलता हो जस्तो लाग्छ । ” आगामी दिन हरु मा अझै राम्रा राम्रा कृती हरु दिदै जाने छु।
जहाँ रहे पनि नेपाल र नेपाली को नाम राख्ने छु । जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि देश को नाम राख्न पाउ, यो देश को झान्डा सुर्य चन्द्रमा फर्फहराइ रहेको हेर्न पाउ, हरेक मान्छे को परिचय सँग देश जोडिएको हुन्छ त्यसैले यो देश्, यो माटो आम जती कै पबित्र लाग्छ । जिबन भर यस्कै सेवा गर्न पाए आफ्नो जिबन सार्थक भए को महसुस गर्ने छु।
यस अघी बिशेष त प्रेरणादायी किताब हरु का लेखक राजन थपलिया का “थिन्क अबाउट इट्” “सिम्पल रुल्स्” “टर्निङ पोइन्ट” “स्वीट स्पीचेज्”र आगामी प्रकासित हुन लागेको पुस्तक “बि रेडि” र इ बूक बिज्नेस आइडिया आदी हुन । किरिएट पब्लिकेसन ले बजार मा नोभेम्बर १३, २०१४ मा नै “स्वीट स्पीचेस्” प्रकाशित गरेको थियो भने बार्न्स एन्ड नोबलले भने नोभेम्बेर १५ देखी बिक्री बितरण सुरु गरेको थियो।
प्रकाशित मितिबाटै अमेजन डट कम ले पनि बिक्री बितरण सुरु गरिसकेको थियो। “स्वीट स्पीचेस्” मेडिकल साइन्स मा आधारित विभिन्न रोग् र त्यसका समाधानहरु समेटिएको पुस्तक हो । लेखक थप लिया मेडिकल साइन्स को बिद्यार्थी हुन । आगामी किताब “बि रेडि” मा अबसर ले जुन सुकै बेला पनि ढोका ढक्ढक्याउन सक्छ त्यस को लागि हामी तैयार हुनु पर्छ भन्ने प्रसङ लाई बोकेको छ।
२५ माघ २०७१, आईतवार ००:४५ मा प्रकाशित